सेवा नै जीवनको लक्ष्य - Artha Nepal
सेवा नै जीवनको लक्ष्य
Manoj Thapa — ७ पुष २०७४, शुक्रबार ११:२०0comment
विराटनगर आँखा अस्पताल
मानिस यो संसारमा जन्म लिएर आएपछि समाजको लागि केहि गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता डा. दिवा हमालको छ । अहिले विराटनगर आँखा अस्पतालमा कार्यरत रहेकी हमाल सानैदेखी शान्त स्वभावकी थिइन । उनी आफ्नो काम प्रति भने सधै जिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत हुन्छिन् । अध्ययनको लागि काठमाडौंको तिलगंगा अस्पतालमा रहेकी हमाल अध्ययन पुरा गरेर विराटनगरमा गएर धेरै विरामीको उपचार गर्ने प्रणका साथ अघि बढेकी छिन् । काठमाडौंको ज्ञानकुञ्ज स्कुलबाट एसएलसी पास गरेकी हमालले विश्व निकेतनबाट विज्ञान विषयमा उच्च उच्च शिक्षा लिएकी हुन । हमालले बंगलादेशबाट एमविविएस अध्ययन पुरा गरेकी छिन् । सन् २००५ बाट उनले नेपाल मेडिकल कलेज, प्रसुति गृह, क्यापिटल नसिङ होम लगायतका स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुमा सेवा गरिन । सुरुका दिनहरुमा गरेको दु:ख आज उनी स्मरण गर्छिन । उनी नेपालका विभिन्न ग्रामिण भेगहरुमा गएर आँखा शिविरहरु मार्फत विरामीहरुको उपचार पनि गर्दै आएकी छिन् । नेपालमा पहिलेको भन्दा अहिले आाखाको बारेमा धेरै जनता सचेत भएको उनको अनुभव छ । पहिला आँखा विग्रने अवस्थासम्म पुग्दा पनि अस्पताल नआउने अवस्था थियो । नेपालीहरुमा विशेषगरी मोतिबिन्दु, जलविन्दु, आँखाबाट आशु आउने समस्या बढि हुने गरेको डा. हमाल बताउछिन् । खानपानदेखी लिएर वातावरणको कारण पनि आँखामा प्रभाव पर्ने गर्दछ । शहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामिण क्षेत्रमा आँखाका रोगहरु कम लाग्ने उनले बताइन । उद्योग मानव बस्तीबाट टाढा राख्ने र बायु प्रदुषण रोक्न सकेमा पनि आँखामा लाग्ने रोग धेरै कम हुने हमाल बताउाछिन् । शिक्षित व्यक्तिहरु अप्रेषन गर्न नडराउने भएपनि ग्रामिण भेगबाट आउनेहरुमा आत्मविश्वास कमि भएको उनी बताउाछिन् ।
आफ्नो समयमा मेहनत गरेर अघि बढ्नु नै जीवनको सार्थकता हुने उनी बताउाछिन् । सधै राम्रो काम गर्ने र अरुलाई सहयोग गर्नु पर्ने उनको मान्यता छ । यहि कारण उनी धुरदराजमा गएर गरिब जनताको सेवामा सर्मपित हुन्छिन् । आँखा शिवर मार्फत उनले धेरै विरामीको उपचार गरेकी छिन् । विरामी निको भएर जाने बेला प्राप्त हुने आर्शिवादले उनलाई सधै काम गर्न हौसला मिल्ने गरेको छ । आँखा नदेख्ने विरामी आँखा देख्ने भएपछि खुशी भएर उपहार बोकेर आएको कुरा उनी अहिले पनि स्मरण गर्छिन् ।
आफ्नो समयमा मेहनत गरेर अघि बढ्नु नै जीवनको सार्थकता हुने उनी बताउछिन् । सधै राम्रो काम गर्ने र अरुलाई सहयोग गर्नु पर्ने उनको मान्यता छ । यहि कारण उनी धुरदराजमा गएर गरिब जनताको सेवामा सर्मपित हुन्छिन् । आँखा शिवर मार्फत उनले धेरै विरामीको उपचार गरेकी छिन् । विरामी निको भएर जाने बेला प्राप्त हुने आर्शिवादले उनलाई सधै काम गर्न हौसला मिल्ने गरेको छ । आँखा नदेख्ने विरामी आँखा देख्ने भएपछि खुशी भएर उपहार बोकेर आएको कुरा उनी अहिले पनि स्मरण गर्छिन् । डाक्टर हुनुको नाताले अस्पतालमा समय बिताउन परेपनि हरेक समयलाई रमाइलोको रुपमा लिने गरेकी छिन् । परिवारलाई पनि उनी समय व्यवस्थापन गर्दै आएकी छिन् । परिवारको सबै सदस्यको सहयोगको कारण आफ्नो काममा पूर्णरुपमा लाग्न पाएकी बताउाछन् । उनी आफुलाई भाग्यमानी व्यक्तिको रुपमा चित्रण गर्छिन ।
ग्रामिण भेगमा रहेका धेरै विरामीहरुले अझै पनि उपचार नपाएको डा. हमालले देखेकी छिन् । आँखा देख्न नसक्ने भएमा के हुन्छ भन्ने कल्पना नगर्दा उपचारमा ध्यान नदिएको उनले बताइन । डाक्टरहरुले विभिन्न चेतनामुलक कार्यक्रम, शल्लेक्रिया जस्ता शिविर राख्नु पर्ने आवश्यकता उनले देखेकी छिन् ।
आफ्नो लक्ष्यमा प्रतिबद्ध भएर अग्रजले भनेको मानेर मेहनतका साथ अघि बढ्यो भने सफल भइने उनी बताउाछिन् । उनी भन्छिन् – ‘विराटनगरमा जब आफ्नो डिर्पाटलाई सफलताका साथ अघि बढाउन सकेपछि मात्र आफुलाई सफल भएको ठान्छु ।’ ग्रामिण भेगमा गएर उपचार गर्दा उनलाई आनन्द लाग्छ । उनी भन्छिन् -‘ स्वास्थ्य क्षेत्रसंग सम्बन्धीत सबै पक्ष मिलेर जनचेतना मुलक काम गर्न सके धेरै रोग लाग्नबाट बच्न सकिने छ भने रोग लागेको खण्डमा पनि उपचार गराउन आउनु हुन्छ ।’
काठमाडौंको कुलेश्वरमा बुबा दिनेश विक्रम हमाल र आमा मञ्जुश्री हमालकी छोरी डा. दिवा हमाल अहिले परिवारका साथ खुशी जीवन बिताइ रहेकी छिन् ।